LOZA TETO AN-DRENIVOHITRA :: Olona roa samy nindaosin'ny fahafatesana • AoRaha
LOZA TETO AN-DRENIVOHITRA Olona roa samy nindaosin’ny fahafatesana
Nisehoana lozam-piarakodia nahafatesana olona roa samy hafa teto an-drenivohitra, omaly vao maraina be. Ny iray nandavo lehilahy voalaza fa nikasa hamonjy ny asany teny Anosibe, tokony tamin’ny 4 ora maraina. Ny faharoa, lehilahy iray hafa namily ny fiarany nidona tamin’ny andrin-jiro teny Vassacos Antanimena, omaly vao maraina be ihany koa. Teratany vahiny iray hafa koa no tsy mahatsiaro tena.
Eo amin’ny faha-46 taona ilay namoy ny ainy teny Anosibe. Tombanana ho vokatry ny dona mafy nahazo ny lohany tamin’ny fianjerany tamin’ny arabe no nitarika ny fahafatesany, araka ny fitantaran’ireo mpitsabo teny amin’ny hopitaly Hjra. Iry lehilahy tra-doza teny Vassacos, izay 32 taona ihany koa voadona mafy teo amin’ny lohany.
Lozam-pifamoivoizana, omaly ihany koa, no nitranga teny akaikin’ny tsenan’i “Pochard” eny Soarano. Nodonin’ny taksibe iray mampitohy ny renivohitra amin’Ambohimanarina ny môtô iray nentina teratany vahiny sy olon-kafa iray. Tsy fantatra izay nahazo ilay fiara fa avy hatrany dia nodoniny mafy ity môtô ka nipitika avokoa ireo olona roa teo amboniny. Tsy naha- tsiaro tena io vahiny io. Noentina novonjena haingana teny amin’ny Hjra izy.
Raharaha vola sandoka Olona dimy amby folo nosaziana hiasa an-terivozona sy handoa onitra
VONO OLONA :: Nitombo iray ny mpamily mpitondra mpizaha tany maty voatifitra